Global Voices teny Malagasy » Taratasy ho an’i Shina: Efa ho roa taona izao ilay Uyghur namako, Zainur, no voatazona any amin’ny tobinareo any · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Novambra 2019 7:19 GMT 1	 · Mpanoratra Addy McTague Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Foko sy Fiaviana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
Taratasin'i Zainur Turdi ho an'ny mpanoratra. Sary an'ny mpanoratra
Fony sambany vao nahita ny angondrakitra momba ireo nidiran-doza tao Xinjiang  aho, efa ho an-jatony angamba ireo fijoroana vavolombelona noteteziko tao. Noraketiko ny momba ireo nanatri-maso sy ny fifandraisan-dry zareo amin'ireo niharan-doza. Reny, Iray tampo. Zanaky ny iray tampo amin'ny ray aman-dreny. Tovovavy zanaky ny iray tampo amin'ny tena. Havana ao anatin'ny fianakaviana. Betsaka no avy ao anatin'ny fianakaviana. Mpiray vodirindrina. Namana. Nanamatroka ny eritreritro ireo fahatsiarovana: an'ireo olona fantatro fahiny izay voatàna, an'ireo namana tsy hita. An'ireo olona izay tsy voatandritandriko ary tsy tsaroako ny anarany. An'ireo olona izay tononiko isaky ny mivavaka ny anaran-dry zareo.
Nihevitra aho hoe tsy dia nananako ny vaovao ampy tsara momba ny olona iray fantatro mba hahafahako manoratra fijoroana vavolombelona iray. Tsy nahafantatra anaram-pianakaviana aho*. Tsy misy laharana shinoa ho famantarana. Fa teo am-panangonana ny entako tao an'efitrano, tsy ela kory izay, naka fotoana kely aho nanokafana ireo taratasy voaraiko avy amin'ireo namana fony aho niala tao Beijing tamin'ny May 2017. Zainur (“Zeynur” raha soratra latina) no nanoratra ny lava indrindra tamin'ireny taratasy ireny. Ny andro nialàko tao, nipetraka izy nandray ny tanako teo ivelan'ny efitrano fandriako. Nilasilasy teny ireo mpianatra sasany avy amin'ny fandaharanasako, nandamina ny entan'izy ireo, ary nanao veloma ireo namany. Toy ny tsy niteny akory i Zainur. Rehefa nitsangana handray fiara fitaterana aho, notsindriany tao anaty felatànako ilay taratasy, norohany ny tavako ary lasa izy nihazakazaka. Taty aoriana kely vao henoko fa hoe niverina niditra nitomany tany an'efitrano fandriany izy. Nandritra izay fotoana izay, nitomany mangina teo am-pipetrahana tao anatin'ilay fiara mpitondra ho any amin'ny seranampiaramanidina aho. Faha-21 taonako tamin'io.
Taratasy avy amin'i Zainur Turdi ho an'ny mpanoratra. Sary an'ny mpanoratra.
43 andro izay no nifankahafantaranay. Izay no nosoratany tao anatin'ny taratasiny. Yyghur iray namana iraisana no nampifandray anay, ary nanomboka teo dia lasa tsy nifankafoy izahay. Nihodidina ny fiainam-bavaka ny ankamaroan'ny andro naha-mpinamana anay. Na dia tsy misy firy toy ny any Shina aza ireo toerana masina, toy ireo Uyghurs marobe hafa dia ifikiran'i Zainur mafy dia mafy izay rehetra miendrikendrika zava-masina. Ny ankamaroan'ny fotoanany dia hakàny tàhaka ireo fihetsika rehefa mivavaka, na aiza na aiza ipetrahany na itsanganany.
Indraindray dia sahiny mihitsy ny mamerina manontolo ireo fihetsika, indray mandeha izay, fony aho nilaza taminy fa tsy misy tokony ho ahiany. Ary indraindray aho mijery azy mamerina am-pisalasalàna ireo fipetraka ruku sy sujood, miondrika sy miankohoka, miaraka amin'ny rantsan-tànany. Ny rantsan-tànany. Indray hariva izay, tao anaty fiarandalamby izy, nankininy teo an-tsoroko ny lohany ary nanomboka nimonomonona ny al-Fatihah  izy, ny toko voalohany ao anatin'ny Korany, sady mamihina ny tànako isaky ny miova ny fipetraka. Taty aoriana dia nolazainy tamiko ny fitadiavany ny reniny sy ny fanaovany toy izany tany aminy, any Xinjiang, ao an-tanànan'i Kashgar, isaky ny manao ny “salah”, na ny vavaka isanandro.
“Ny reniko no maoske-ko,” hoy izy mantsy ahy. “Angamba ny rahavavy no zavatra tsara indrindra manaraka izany.”
Kanefa, amin'izay rehetra tsaroako, hoy izy mantsy ahy, dia tsy tsaroako ny feony. Manana sariny iray aho, mitafy mainty, mivavaka, mitodika tsy manatrika ny fakantsary ny endriny. Ny hany fiantraika manokana amin'ny tena mba ananako momba azy dia ity taratasy ity sy fehezanteny iray. Tsy misy tsaroako afa-tsy fehezanteny iray tamin'ny feony: “Tsy haiko hoe nahoana.”
Kadenà iray eo am-baravaran'ny maoske iray ao Beijing. Sary an'ny mpanoratra.
Lazainy foana io rehefa mitantara amiko izay nitranga tany amin'ny tanàna nahaterahany izy. Raràn-dry zareo tsy hahazo mandeha maoske ny vehivavy. Topazan-dry zareo maso ny endrika rehefa eny an-tsena sy eny amin'ny seranampiaramanidina. Raràn-dry zareo ny “hijab”. Raràn-dry zareo ny fifadiankanina. Manjavona ny mpiray vodirindrina amin'ny tena. Feno kamerà eny rehetra eny. Nalevinay ny bokinay. Notenenin-dry zareo izahay hanaisotra ny hidin-tranonay. Nalain-dry zareo ny pasipaoroko. “Tsy haiko hoe nahoana.”
Taratasy avy amin'i Zainur Turdi ho an'ny mpanoratra. Sary an'ny mpanoratra
Herintaona taty aoriana, ny Jona 2018, niverina nankany Beijing aho. Ny alina talohan'ny Eid aho no nitody tao. Nesoriko ny “hijab”, fantatro tsara mihitsy fa rehefa tsy misy “hijab”, tombony ho ahy ny tsy fananako zavatra hafa afa-tsy ny hoe Amerikàna manana anarana anglisy. Amin'izay dia ho vitako tsara ny mitady ireo Uyghurs fantatro. Nanatrika irery ny vavaka Eid aho, narandrako ny volo, ary notsipazako sarondoha zara raha narakotra ny loha. Fa herintaona monja talohan'izao, namonjy maoske isankerinandro aho niaraka taminà namana Uyghurs marobe. Tamin'ny Eid 2018, andiana polisy fotsiny no hita nijoro teo ivelany, misava ny taratasin'ireo andian'olona Hui  sy ireo vahiny niditra. Nodinihan-dry zareo ny pasipaoroko. Nodinidinihan-dry zareo ny endriko. Dia nilazany aho handeha. Mbola hanandrana handeha maoske indray aho mandritra ity diako ity. dia hahita varavarana mihidy sy misy kadenà. Misy ireo takelaka manambara fa loza mitatao ny firafitra manontolon'ilay trano.
Namako Uyghur iray efa antitra no mbola mandeha any amin'ny oniversite, miandry ny hahazo ny diplaomany. Fantany fa mety halefa any amin'ny toby izy raha toa ka tsy mahavita mahita asa. Nomarihany ny amin'ireo iray tampo aminy. Lasa any am-ponja daholo izao ireo anadahiny. Any an-toby ny rahavaviny iray, ireo anadahy tsy omby kibo aminy sy ireo namany. Manao asa an-terivozona. Ny asa anaty ozinina. Asan'ny polisy. Ny fanjavonana. Ireo tsy fantatra. Zainur?
Hatramin'ny 5 Jolay 2017* i Zainur no efa voatazona any aminà toby iray
* Vaovao voamarin'ny mpanoratra avy amin'ireo fanambaràna samihafa nataon'ireo loharano mahalala tsara ny momba an'i Zainur. Voamarina fa Zainur Turdi . no tena anarany feno
Ny angondrakitra momba ireo nidiran-doza tao Xinjiang  no angondrakitra lehibe indrindra amin'ny teny anglisy azo karohana momba ireo niharan-doza noho ny famoretana misy amin'izao fotoana ao XUAR. Raisin'ny Global Voices an-tanan-droa ireo fijoroana vavolombelona avy amin'ireo namana sy havan'ireo olona izay niharan-doza tamin'ny famoretana ataon'ny fanjakana ao XUAR.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/14/144685/
 angondrakitra momba ireo nidiran-doza tao Xinjiang: https://www.shahit.biz/eng/